क्षति गर्दैन भन्दा-भन्दै आधा घण्टामै सक्यो सलहले देउखुरीका मकै « Janaboli
क्षति गर्दैन भन्दा-भन्दै आधा घण्टामै सक्यो सलहले देउखुरीका मकै
दाङ । विज्ञहरुले नेपाल भित्रिएको सलहले क्षति गर्दैन भन्दा भन्दै दाङको देउखुरीमा सलहले आधा घण्टामै मकैबाली सखाप पारेको छ । ठूलो अन्न भण्डार मानिएको देउखुरीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको जनाइएको छ । मंगलबार दिउँसो राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र लमही नगरपालिकामा सलहका बथान देखिएका छन् ।
सलहका बथानले मकैबाली नष्ट गरेको छ । हरियो मकैबारी एकै क्षणमा उजाड बनेको छ । स्थानीय शिक्षक यादव आचार्यले दुई किलोमिटर क्षेत्रमा सलह छपक्कै भएको जानकारी दिए । उनी भन्छन् ‘सलह भन्ने किरा त अचम्मका हुने रहेछन्, करिब दुई किलोमिटर टाढासम्म बारीमा छपक्कै बसे’, उनले भने, ‘भर्खरै चमर लाग्न थालेको मकै सबै सखाप पारे ।’
त्यस्तै, सोही वडाको लालमटिया भन्ने ठाउँका किसान बुद्धिराम चौधरीले आफ्नो आठ कठ्ठामा लगाएको मकै आधाभन्दा धेरै ध्वस्त भएको जानकारी दिए । उनले थाल ठटाएर र धुँवा उडाएर पनि सलह नभागेपछि मकैको बोट हल्लाएर लखेटेको जानकारी दिए । राप्ती गाउँपालिकाका किसानहरू यसैवर्ष अमेरिकी फौजी किराबाट पीडित भएका थिए । फौजी किराबाट जसोतसो मकै जोगाउन सफल भएका उनीहरू फेरि सलहको मारमा परेका छन् । फौजी किराबाट जोगिन घरेलु औषधि छरेर पनि नभएपछि गाउँपालिकाले नै वि षा दी उपलब्ध गराएको थियो ।
सलहलाई भगाउन स्थानीयले थाल ठटाएको, टायर बालेको र हल्लाखल्ला गरेको शिक्षक आचार्यले बताए । ‘यति गर्दा माथिमाथि उडेका चाहिँ बस्न सक्दा रहेनछन्,’ उनले भने, ‘तर बाली खाइरहेका त सितिमिति भाग्दा रहेनछन् । बोट हल्लाएपछि मात्रै उडेर जाँदा रहेछन् ।’ राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मसुरियामा पनि सलह किरा देखिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी सलहको बथान थुप्रै बिघामा लगाइएको मकै बालीमा बसे पनि कसको बारीमा कति क्षति भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘क्षति त पुर्‍यायो नै तर कति क्षति भयो भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख सन्देश धितालले भने सलह किराले दाङमा मकै बालीमा क्षति पुर्‍याउन थालेको बताए । ‘ठूलो झुण्डमा देखिएको सलहले मकैमा क्षति पुर्‍याउन थालेको छ । हामीले सलह धपाउन सक्रिय हुन सन्देश प्रवाह गर्दै आएका छौं,’ धितालले भने ।
सलहका बथान दाङमा देखिन थालेपछि पालिकाहरूले स्थानीय एफएम रेडियोमार्फत् सलह भगाउने घरेलु उपायसहिको सन्देश प्रवाह गर्दै आएका छन् । मकै दाङको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । मंगलबार नै राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ को चम्फानगर, गढवा गाउँपालिका वडा नं. ७ मानपुर र लमही नगरपालिका वडा नं. ६ को मध्यनगरका किसानले लगाएको मकैमा पनि सलहले क्षति पुर्याएको छ । यहाँका किसानहरूले पनि रित्ता भाँडा ठटाउने, आगो बालेर धुवाँ उडाउने लगायतका काम गर्दै आएका छन् ।